एजेन्सी -अमलामा भिटामिन सी प्रसस्त पाइन्छ । अमला त्रिफलाको ३ औषधिमध्ये एक गुणी जडिबुटीमा पर्छ । भिटामिनको राम्रो स्रोत भएकै कारण अमलालाई हिन्दु धर्ममा पनि पुजनीय फलको रुपमा राखिन्छ । भनिन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदको छायाँमा बसेर खानाले मात्रै पनि अनेक रोगहरु निको हुन्छ । अमलामा विभिन्न रोगहरु निको पर्ने क्षमता हुन्छ ।
प्रत्येक दिन एउटा अमला खानाले पेट सफा र कब्जियत लगायत पेटमा देखा पर्ने समस्याहरु हुन पाउदैन साथै ग्यास्ट्रिक पनि केहि हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ । अमलाको सेवन दैनिक गर्नाले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबुत हुन्छ । किड्नी संग सम्बन्धित रोगहरु लाग्दैनन् । अमलाको जुस बनाएर खानाले पनि रगत सफा हुन्छ र शरीर स्वस्थ रहन्छ। दैनिक एउटा अमला खानाले फोक्सोसंग सम्बन्धित रोगहरु लाग्न पाउदैनन् ।
अमला अनुहार र कपालको लागि पनि फाइदाजनक छ। अमलाको दैनिक सेवनले अनुहारको छालामा चमक ल्याई लामो समयसम्म जवान देखिन र कपाल फुल्नबाट जोगाउँछ ।अमला सेवनले आँखा तेजिलो बनाउनुका साथै पत्थर हुनबाट जोगाउँछ ।
* जिन्दगी के हो ?
जिन्दगी के हो जिएर हेर, आसु के हो पिएर हेर्, न जिइ न पिइ वास्तव मै थाहा हुँदैन बास्तबिकता के हो भनेर तर म भन्छु दृष्टिकोण बद्ले बदलिन्छ जिबन । माछा पानी मा पौडिरहेको छ तैपनी थाहा छैन कि उ कहाँ छ । मान्छे यो धर्ती मा बाची रहे को छ तैपनी थाहा छैन कि उ कहाँ छ । त्यो माछा लाई पानी को अस्तित्व थाहा नभए जस्तै मान्छे लाई पनि जिबन को अस्तित्व थाहा छैन । म कहाँ छु ? म के गर्दै छु केहि थाहा छैन तैपनी उ अन्धकार मा दौडी रहेको छ । आसा जस्तो अन्धकार केहि छैन । यसले जिन्दगी डढेलो लगाइ दिन्छ । लक्ष्य बिना को आसा बेर्थ छ । अनि मान्छे भौतारी रहन्छ । भेट्ने लाई सोधी हल्छ कि जिबन के हो ? कुनै एकै शब्द को परिभाषा मा जिबन लाई बुझ्नु गलत हुन्छ । जुन अस्तित्वले गर्दा मान्छे को जिबन रहेको छ त्यही हो जिबन ।
मान्छे लाई बाचेर मात्र पुग्दैन आफु लाई पूर्णत बदल्नु पर्छ । बदल्नु को मतलब यो हो कि हिजो म जुन निकृस्ठ जिन्दगी बाचेको थिए त्यस बाट एक स्थर माथि उठ्नु अनि जिबन उपायोगी गुण हरु को बिकास गर्दै जानु । मन ले आफ्नो मन को सुस्म सक्ती लाई आत्मा सुझाब दिदै जानु भने को बदलिनु हो । बिकास को अर्को नाम नै बदलिनु हो । किताब मात्र पढेर कोही पनि बदलिन सक्दैन जब सम्म दैनिक अभ्यास गरिदैन । किताब पढ्नु भने को चेतना को स्तर बृदी गर्नु मात्र हो ।बदलिन को लागि बल चाहिन्छ त्यो हो मन को बल, आत्मा सुझाब्, आफ्नो मन ले मन लाई भन्दै जानु पर्छ, आत्मा सुझाब दिदै जानु पर्छ कि म जे पनि गर्न सक्छु । अनि आफु लाई राम्रो चिज सँग तुलना गर्नु, उच्च स्तर को मान्छे हरु सँग सँगत गर्नु भने को आफु लाई बदल्ने पहिलो बाटो हो ।
यो संसार मा प्रकृती को आफ्नै नियम छ । बिहान घाम उदाउछ, फेरी राती अस्ताउछ । आसार मा पानी पर्छ, पुर्णिमाको रात मा चन्द्रमा उदाउछ । त्यसरी नै मान्छे को जिबन मा पनि परिवर्तन भ इ रहन्छ तर हामी देख्दैनौ । हामी चिन्दैनौ आफैले आफैलाई त्यही नचिन्नु नै जिन्दगी मा ठुलो दुर्घटना हुनु हो । हामी त भागि रहेछौ हार खाइ खाइ, तड्पी रहेछौ कसै को याद मा । आस्ताउदै बिलाउदै अनन्त गतिमा आफैले आफैलाई पुरी रहे छौ । छोडेर जाने माया लाई गल्ली – गल्ली मा कुरी रहे छौ । कती अन्धाकर बनाएका छौ हामी ले आफ्नै जिन्दगी । जुन कुरा पाइदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसको पछी लागि रहेका छै अनि हामी बर्बाद नभए को हुने ।
निरस अनि निरास मान्छे हरु सुन्दरता लाई पनि कुरुप देक्छन । लक्ष्य भए नै जिन्दगी को कक्ष्य मा पुग्न सकिन्छ । बुद्ध एक गाउ मा हिडी रहेका थिए । साझ पर्नु भन्दा पहिले अर्को गाउ मा पुगी सक्नु पर्ने थियो । बाटो मा एकजना किसान लाई सोधे मित्र नगर कती टढा छ यहाँ बाट अनि त्यो किसान ले भन्यो मात्र २ माइल टाढा छ । धेरै छैन अब बिस्तारै जानुस । ३ घण्टा हिडी सक्यो मित्र नगर आएन । फेरी अर्को एक बृदा लाई सोधे अनि ति बृदा ले भन्यो- अब २ माइल बकी छ । आउनै लागि सक्यो । राम्रो सँग जानुस नानी । त्यसपछी बुद्ध लाई उनका सिश्य ले सोध्यो, भगवान यि बृद ले पनि २ माइल टाढा छ भन्यो बास्तबिकता के हो ? अनि बुद्ध ले जबाफ दिए, यिनी हरु ले झुटो बोले को छैनन । यिनी हरु लेय मन को परिभाषा लाई राम्ररी बुझेका छन । यसरी नै मन मा आसा हरु जगाइ राख्नु पर्दछ कि आब लक्ष्य नजिकिदै छ भनेर यो यस्लाई जिबन कला भनिन्छ ।